Ngo-2010, isiRashiya kwaba elihunyushwe incwadi "Shantaram," Gregory David Roberts. abafundi lezivakashi zahlukahlukene: kusukela sublime kuya ngokucijile ezimbi. Uyini umbono a baxgeki yombhali Australian? Lokho uyakwazi ukuletha kule noveli, nokuthi, kunalokho, kubangele nombono omubi? Ukubuyekezwa kwe incwadi "Shantaram" - isihloko lesi sihloko.
Enye intatheli kanye nohambo lover, kusale ukubuyekeza kwethi "Shantaram", waveza umbono wokuthi umsebenzi Roberts yatha- eRussia ngoba isihloko okuthuthuka ngokomoya. Phela, wakhulela amanoveli akhe, zabuna omkhulu Russian. Omunye kungaba zilandise izizathu eziningana ukuthi ukubuyekeza incwadi ethi "Shantaram," basho njalo ezweni lakithi, iningi udumo. Kodwa sizokhuluma ngalokho kamuva. Okokuqala, kufanele amagama ambalwa wathi mayelana umbhali, ogama biography Wawugujelwani kule noveli.
Umhlali nesinye Australia ashisayo ngemva kwesehlukaniso nomkakhe kanye sokuvalelisa nendodakazi yakhe ayithandayo wayazi ubunzima yesizungu. Lahla okucasula wanquma ukusebenzisa izidakamizwa ezingekho emthethweni. Ngenxa yalokho, akabange esakwazi ngokuphelele ikhono lakhe ukubuyela fortune umndeni, kodwa wathola ukuluthwa i-heroin. Lokhu Australian kwakunguJesu Roberts - ". Shantaram" umbhali kule noveli yodumo
Incwadi (ukubuyekezwa, izincazelo)
Uzungu isebenza kuhlobene ne biography of umlobi. Ukuze unikeze ngokwabo nge izidakamizwa ezingemthetho Robert kwaqala ukuphuca ababolekisi, izinkampani zokwakha kanye nezitolo. He bophezela amacala akhe eyinqaba: Akumelwe nimemeze, akazange ukusongela noma usebenzise ngobudlova. Robert ngakhipha isibhamu sethoyizi futhi ethobekile kakhulu ukuveza izidingo zabo. Kodwa Roberts wanikezwa eside namanje eside: Eminyakeni eyishumi nesishiyagalolunye ejele. Esejele, la nombhali "Shantarama" wabalekela India. Kulesi Fairy izwe lokuqala bese sekube ezenzekayo kwakheka isisekelo incwadi.
yisigidi amakhophi - yalolu hlobo inoveli "Shantaram." Izibuyekezo yencwadi zabantu abadumile baye njalo esadlala indima ebalulekile yokufuna umkhiqizo. Roberts ekhaveni noveli ungabona umbono kaJonathani Carroll. American umlobi yesayensi ushiye ukubuyekeza incwadi ethi "Shantaram", lapho waveza umbono wokuthi umkhiqizo ngeke ukusiza kodwa uthanda. Ngokusho kwakhe, akanandaba "Shantaram" kungaba umuntu nabangenaluthando. iphuzu okunjalo categorical umbono ephefumulelwe abafundi emhlabeni wonke. "Shantaram" sekuthandwa kakhulu ezweni lethu.
adventure Russian futhi Indian
Ukubuyela umbuzo kanjani ukuthatha abafundi isiRashiya inoveli mayelana owenza Australian, kufanele unikeze izizathu ezimbalwa kungani ngakho ukufunda kahle kuleli zwe "Shantaram."
Incwadi abagxeki okuyizinto ngempela impikiswano, usuthandwa eRussia esikhathini lapho sekuwumkhuba ukuya eNdiya okuthuthuka ngokomoya. "Shantaram" kwaba umhlahlandlela ekahle abahambi. Esikhathini inoveli, zikhona izenzakalo engamashumi amathathu edlule. Kodwa kancane sekushintshile kusukela ngaleso sikhathi, kokubili eBombay efika waphunyuka bopha ku umndeni Roberts. Umkhiqizo lokhu kumbhali - ziqale futhi incwadi mayelana India. "Shantaram" ukuthi Izibuyekezo ungalilahli ezithophayo njalo, abafundi abaningi adunyiswe ngokunembile ngoba leli lizwe sikhonjiswa ukwehlukana kwayo. Ngakho mayelana India kungekho kumbhali ingakamiswa posted.
Mayelana kanjani noveli wazalwa
Futhi Roberts nabadumile uhlamvu izikhathi zakhe eziningi ejele. Omunye umbhali wencwadi ethi, kuyo kulesi sihloko, kwaba evalelwe yedwa. Esimweni esinjalo, ngokuvamile abantu basangane. Roberts umakhelwane ekamelweni, isibonelo, wayevame ukuhlela nokuhlaselwa ejele kulinda ngaso sonke isikhathi uma ngivula akhe abode zizimbi. Futhi banquma ukumsiza. Njalo ebusuku, ngemva izibani out, Roberts wafundisa ukuzindla umakhelwane. Ngokushesha belekelelwa iziboshwa. Ukuze lokhu akuzange kudinge ukuthintana ngokoqobo noma iso. Kwanele nje nizwane.
Ngemva kwenyanga, Roberts yababiza okuthiwa ngifuna. Njengobe abengakwati konkhe loko akufundisayo nezinye iziboshwa, wabuza kuyo ukuthi angayeki amakilasi kusihlwa. Ngempela, ngemva ejele waqala ukuqhuba ukuzindla, zazingekho okubulala noma ukuhlaselwa. Robert wagcwalisa isicelo, kodwa kunalokho ubuzwa ngepeni nephepha. Wayefanele ukuchitha ejele isikhathi eside, iminyaka eyishumi nanhlanu.
Izwe lobugebengu Bombay
Ethos hero kwenza abanye abafundi imizwelo engakhi. Shantarama Ngaphezu kwalokho, incwadi has a lot of izinhlamvu, ezingelwa ukushushumbisa izidakamizwa, izikhali noma amadokhumenti mbumbulu. Umbhali ngaye encwadini edume phikisana lapho kuxoxwa izinhlamvu zakhe abanalutho abajwayelene ne izigcwelegcwele encane. Bangamalungu mafia - emphakathini okuwukuphela has imithetho yayo siqu kanye nemithetho. Nokho, akuzona zonke umfundi uhlamvu onozwela ohlale usebenzisa izidakamizwa futhi uthi ngezihloko zefilosofi. Okungukuthi, lezi ikakhulu abathintekayo emachawe Roberts.
Ingabe kuyazuzisa ukufunda?
Inkolelo yokuthi "Shantaram" - lo xxi enkulu inoveli, kancane nehaba. Okungenani, okubhekwa abagxeki abaningi eRussia. Kodwa-ke kuhle ukucabangela ukuthi umbhali yale ncwadi - umbhali. Ingxenye enkulu yokuphila kwakhe ayichitha ejele, abaphethwe ukuluthwa izidakamizwa eziyingozi, izikhali ithengiswe, walwa e-Afghanistan. Kafushane, "amayunivesithi akaqedanga." Ngisho abafundi ababengebona alikhuthalele ncwadi esinye seziboshwa wangaphambili, ngezinye izikhathi Kunconywa ukufunda lesi indzaba. Kodwa ukuze abone "Shantaram", mhlawumbe, akufanele njengoba wobuciko - njengomuntu indoda okukhuluma nge phetho okungavamile. Roberts wavakashela imijondolo of Bombay, ke wafakwa ekamu abanochoko, phakathi kwabangane bakhe kwakungamadodana mujahideen Afghan. Kukhona neze umuntu biography ezicebile zomhlaba etemibhalo.
Yini eyenza Izibuyekezo ezingezinhle mayelana ncwadi Roberts? Uzungu is kakhulu welulela. It has a lot of izinhlamvu ezingenziwanga kuchazwa indima. Thanda umugqa, ngokuvumelana abafundi, futhi ngeke asole amanzi. Mhlawumbe kungenxa yokuthi "Shantarama" weza inoveli ekhaliphile. Kodwa kuphela uma usike okungenani ngesigamu.
Ikakhulu encwadini Roberts India. Umbhali echaza kuleli zwe elihle, amasiko alo. Fika e Mumbai, hero has ngemva kwezinsuku ezimbalwa uyaqaphela ukuthi nje abahlala kuleli dolobha akunakwenzeka. Udinga ukuthi ube yingxenye yayo, sifunde ukuphila ngokuvumelana nemithetho yayo. Incwadi okubonisa imijondolo eduze kwalezo zindawo ocebile. Heroes Roberts - yindlela abantu uthole isinkwa sabo ezinzima okhandlayo, futhi mafia izibalo.
Ingxenye yesithathu kule noveli lunikezelwe ngokuhlala iqhawe Afghanistan. Lezi zahluko neze sivuse isithakazelo ngisho phakathi abalandeli "Shantarama". Phela, umlingisi yale ncwadi, kanye kumdlali, elwa ohlangothini we mujahideen ukuthi kungabangela umuzwa umfundi abakhuluma isiRashiya sika.
Ngo-2015 inyatheliswe phambili inoveli mayelana adventures Shantarama. Njengoba kakade iye wathi, indlela lobugebengu Roberts zinothile. Yena ezazishushumbiswa igolide kanye passport, ukuthutha imithi eYurophu. Kodwa ekugcineni nganquma ukuyeka Mafia. Nokho, Roberts waboshwa wagqunywa eziningana eminyakeni engaphezu ejele laseJalimane. On lezi nezinye izenzakalo yencwadi "Shantaram-2."
Izibuyekezo yencwadi "Shadow Intaba"
Ngokwe abafundi balo msebenzi kudlala eziningana "Shantaramu". The hero kuyafana, kodwa ayisekho ilungu mafia, futhi umlobi nesazi Ezifuna. Esikhathini inoveli "Shadow Intaba" akuyona iziqephu eziningi ukuze sitshele mayelana namasiko emhlabeni lobugebengu. Nokho, akukho imibala egqamile kanye ngomdlandla India, okuvumela Roberts noveli yokuqala is kangaka uyakuthanda abafundi.
Naphezu kwemibono mayelana ukudalwa Gregori Devida Roberts, encwadini yakhe ethi ukufunda kuwufanele. Mhlawumbe lezi izindaba akakwazi ngokuthi izincwadi ezinkulu kanye nababhali babo - Classic ophilayo. Kodwa kukhona ezithakazelisayo kusukela iphuzu lolwazi umbono. Futhi sibonga indaba engavamile "Shantaram," inoveli wavusa isithakazelo abenzi mafilimu. Le filimu bayokhululwa 2017.
Uhlobo isebenza "Ashik Kerib". "Ashik Kerib": isifinyezo
Acmeism izincwadi futhi kancane indaba yakhe
Izincwadi mayelana seMpi yoMhlaba yesiBili. Fiction mayelana ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe
Indlela usethe Crossfire? Ngena ngemvume Crossfire